Ibhotile yeglasi, iglasi yeglasi, ikepusi yebhotile-iTroy
Ibhotile yeglasi yegalikhi
I-BOSTON ROUND I-BOTTLE YEBHODLE
Amber inkcazo yegama lokuqala
IGLASI YEPILISI YEBHODLELA
Intetho yesibongo, imvelaphi, ukuhambelana kwefayili Amber
Ibhotile yeglasi yesiraphu
UKUGCINA IKITI YEKHITI
Isiqeshana seLid Jar
Ecacileyo Glass Bottle
Ibhotile yeFlint Vodka
Ubomi kunye neBhotile yeBhotile
Ibhotile yeglasi yesepha
Ingqayi yeglasi kwibhotile
Iglasi Ibhotile kubalulekile
Iglasi ingqayi ingqayi
Iziciko kunye neCaps
Cap Ibhotile yeplastiki
Ingqayi yeBhotile yeAluminiyam
Ukuzimisela kunye noxanduva sisiseko sokufumana ukuthembela kwabathengi
Ukutya iglasi Jar
NGAPHEZU KWEBHOTOLO! yenza ukupakisha kube lula!
Xuzhou Troy Rhweba ngaphakathi no Rhweba ngaphandle, Ltd.
Sibonelela ngokhathalelo lobuqu, izinto zokuthambisa, iziqholo, ukutya kunye nesiselo, ukupakisha okungamayeza kokubini kubathengi abaphezulu. Sivelisa iibhotile ezahlukeneyo kwaye umbala unokuba lilitye & icace, luhlaza & mnyama luhlaza, amber kunye neblue. Iinkonzo ezongezelelweyo nazo ziyafumaneka, njengokuziphatha, ukushicilela isilika kunye nokushicilelwa kweqabaka.
Siyifumana, siyile, siyenze, siyenze, siyithumele, siyigcine, kunye nokunye
Ubuhle kunye nokuCoca uBomi
Ukutywina kunye nobungqina bamagqabi
Kule minyaka ili-15 idlulileyo ikhule yaba sisigidi ...
Ifektri yokubonelela ngeebhotile zeglasi kunye neengqayi ze-kombucha
Yintoni uKombucha? I-Kombucha sisiselo esinetiweyo seti. Isebenzisa iti emnyama okanye iti eluhlaza njengezinto ezisetyenzisiweyo. Inezinto ezahlukeneyo zegwele kunye neebhaktiriya, kunye neeacic organic ...
Makhe sazi ngakumbi ngesikhongozeli sokupakisha iglasi.
Iibhotile zeglasi ziibhotile ezenziwe ngezinto ezenziwe ngeglasi. Kukho imibala emininzi yeebhotile zeglasi, kubandakanya iibhotile zeglasi ezicacileyo, iibhotile zeglasi eluhlaza, iibhotile zeglasi ezimdaka ngombala, iibhotile zeglasi eluhlaza okwesibhakabhaka, iibhotile zeglasi eziluhlaza ezimnyama. Okwangoku, iibhotile zeglasi ezimhlophe ezibonakalayo zezi ...
Ukusetyenziswa kweglasi esetyenzisiweyo kwiGlasi yeglasi / kwiMveliso yeJar
------------------------ Iibhotile zeglasi ezisetyenzisiweyo - UKUSETYENZISWA kokwenza urisayikilishe Yintoni iglasi esetyenzisiweyo? Iiglasi ezisetyenzisiweyo zidluliselwe ekupakisheni okungasetyenziswanga kweglasi, izixhobo ezilahliweyo kunye neglasi yemihla ngemihla ....
Idilesi:Umgangatho we-8, iOfisi yeLanhai D Bldg, iZiko leShishini leLvdi, kwiSithili saseYunlong, eXuzhou, Jiangsu, China